février 2017 - Page 3 sur 51 -
28/02/2017 admintriatra 0
Fotodrafitrasa maro sosona no notokanan’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina omaly tolakandro tao Mahajanga tany amin’ny faritry Boeny nentina nanasoavana sy hanalana fahasahiranana ny vahoaka. Lalana mirefy 3 km sy 700 metatra no notokanana tao an-tampon-tanàna tany …Tohiny
Sonian’ny PM : Nahazoana Touareg iray
Tao anatin’ny taona maro, nampiasana ny fitombokase hosoka misy ny anaran’ny praiminisitra no nahazoan’ny lehilahy iray fiara “touareg”. Tamin’ity taona 2017 ity vao tra-tehaka ny tenany. Tazomina ao amin’ny toby Ratsimandrava nanomboka omaly io fiara …Tohiny
Mahajanga : Mpandraharaha karana notafihana efa-dahy
27/02/2017 admintriatra 0
Teratany karana, tompona magazay lehibe iray ao Mahajanga Be no niharan’ny fanafihana mitam-piadiana nataona jiolahy miisa efatra , ny sabotsy hariva lasa teo. Niditra tao an-trano avy hatrany ireto olon-dratsy ireto . Norobain’izy ireo ny …Tohiny
Raharaha Antsakabary – Befandriana Nord : « Misokatra ny fanadihadiana »
Nanome fanampiana ho an’ireo tra-boina noho ny doro trano tany Antsakabary Befandriana Avaratra ny filoham-pirenena. Ray aman-drenin’ny vahoaka rehetra izy, ka mitsinjo ny mponina rehetra tra-pahasahiranana. Mikasika ny nahatonga ny doro trano kosa sy ny …Tohiny
Filohan’ny Lions clubs iraisam-pirenena:Migadona eto Madagasikara anio
Firenena mikambana : Nanome fanampiana mitentina 8.3 tapitrisa Dolara an’ireo tra-boina